दशैंको टिका : पुर्वराजाबाट कि राष्ट्रपतिसँग लगाउने ? - Saptakoshionline
दशैंको टिका : पुर्वराजाबाट कि राष्ट्रपतिसँग लगाउने ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, आश्विन २१, २०७६ समय: ४:०९:३७
काठमाडौं । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुवैले फरक फरक स्थानमा सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने भएका छन् ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सर्वसाधारणलाई अपरान्ह चार बजे टीका लगाइदिने भएका छन् ।सर्वसाधारणलाई निर्मल निवासमा टीका लगाइदिने गरी समय तय भइसकेको छ । राजसंस्थाको अन्त भएपछि पनि पूर्व राजाले सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने गरेका छन् । विशेषगरी राजसंस्थाका पक्षधरहरु टीका लगाउन पूर्व राजा कहाँ पुग्ने गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार २१ असोज बडादशैंमा दिउँसो १ देखि २ बजेसम्म सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरुलाई टीका लगाइदिने कार्यक्रम तय भएको छ । दिउँसो साँढे दुई देखि साँढे तीन बजेसम्म सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने कार्यक्रम राखिएको छ ।
प्रहरीको सफलता: हराएको मोबाइल बुझाउदै बेलबारी प्रहरी
बेलबारी, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले हराएको ८ वटा मोबाइल फेला पारी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बुझाएको छ । बिहीबार इलाका...
सुनसरी खोलामा पहिलो पटक आरती पुजन
इनरुवा । सनातन कुटुम्ब इनरुवा सुनसरीको पहल र इनरुवा नगरपालिकाको सहयोगमा पहिलो पटक ऐतिहासिक सुनसरी पुजन आरती तथा दिपोत्सव...
समाचकेवा साँस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न
इनरुवा । सुनसरी सदरमुकाम इनरुवा ५ बलाहामा समाचकेवा साँस्कृतिक कार्यक्रम बुधवार सम्पन्न भएको छ । थारु जागृति युवा क्लव बल...
नेकपा सुनसरी भन्छ ८२.५ फुटमै सडक निर्माण होस
इटहरी/ भारत र चीन जोड्ने जोगवनी किमाथाङ्का सडक विस्तारमा एक रुपता कायम हुनुपर्ने नेकपा सुनसरीले बताएको छ । लामो समय विवा...
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जुनियर सर्कलको गोष्ठी तथा कार्यशाला सम्पन्न
धमकुटा । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनकुटा जिल्ला शाखाको आयोजनामा २ दिने जुनियर सर्कलको जिल्ला गोष्ठी तथा कार्यशाला धनकुटामा ...
ईन्द्रपुर जेसिजले जेसिज सप्ताह आयोजना गर्ने
सुन्दरहरैचा, समुदायमा आधारित ईन्द्रपुर जेसिजले कार्तिक ३० गते देखी मंसिर ०७ गते सम्म जेसिज सप्ताह २०१९ आयोजना गर्ने भएको...